Wasiirka arrimaha dibadda Djabuuti oo soo gaaray Muqdisho |
Wafdigii ugu horeyay ee ka qeybgalaya shirka wadamada IGAD ay ku yeelanayaan dalkeena Soomaaliya ayaa dhawaan ka soo degay garoonka diyaaradaha caalamiga ah Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Daqiiqado ka hor ayaa magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyada Djabuuti, waxaana garoonka Aadan Cadde si diirran ugu soo dhaweeyay sii hayaha wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda.
Garoonak diyaaradaha Aadan Cadde ayaa waxaa ku sugan mas’uuliyiin dowladdu u xilsaartay soo dhaweynta wufuudda IGAD ee maanta ku soo qul quleysa magaalada Muqdisho, kuwaasoo si hab maamuus leh usoo dhaweynaya madaxda soo gaareeysa Muqdisho.
Wafdi ka socda Jamhuuriyada Koofurta Sudan ayaa la filayaa in daqiiqado kadib ay soo gaaraan Muqdisho, waxaana halkaasi loogu sameyn doonaa soo dhaweyn heer sare ah.
Wasiirrada arrimaha dibadda ee Sideeda wadan ee ku bahoobay urur goboleedka IGAD ayaa la filayaa iney dhamaantood maanta soo gaaraan Muqdisho si ay uga qeybgalaan shirka wasiirradaasi oo beri ka firmi doona magaalada Muqdisho.